Somaliland oo jawaab kulul kasoo saartay hadalkii R/W Maxamed Xuseen Rooble - Bulsho News
Global player? EU summit to seek answers on China, U.S....
Naciima Xasan Oo Loo Doortay In Ay Kamid Noqoto Senatorada...
Xeer ilaaliyaha DF oo sheegay dowlado shisheeye ay...
Axmed Madoobe oo kulan la qaatay Wakiilka Qaramada...
Jadwalka Doorashada kuraasta Aqalka sare ee Jubaland oo...
Haiti: Burcad afduubatay wadaado Kirishtaan ah oo codsaday...
Waan-waan laga dhex waday Galmudug iyo Ahlu Sunna...
Golaha Amaanka oo ka shiraya Gantaalkii ay tijaabisay...
SYRIA: Qarax lala beegsaday Bas siday Askarta dowlada
Dhageysiga Khudbadaha Musharixiinta Aqalka sare oo Kismaayo ka...
Wasiirka Caafimaadka iyo Agaasimaha Guud Oo Soo Kormeeray...
Laascaanood: U Jeedadda Kulan Ay Wasiirro La Yeeshay...
Muqdisho: Rooble Oo Maamuusay Ergada Soomaaliya Ku Metalayay...
Wasiirka Caafimaadka Oo Qalab Ku Wareejiyay Cusbitaalka Burco
Madaxweynaha Somaliland Oo Hadhimo-Sharafeed La Qaatay Dadka Aragga...
Badhasaabka Gebilay Oo Dhagax dhigay Garroon Laga Hirgalinayo...
Newcastle take emotional ride on day of unspeakable...
Real Sociedad lead the way in Spain and...
Qoowmiyada Reer Nigeria ah isu haysta in ay...
Mowliid: ‘Nabi Muxammad NNKH isaga ayaa billaabay inuu...
Somaliland oo jawaab kulul kasoo saartay hadalkii R/W Maxamed Xuseen Rooble
Hargeysa (Caasimada Online) – Wasaaradda Arrimaha Debadda Somaliland ayaa jawaab kulul ka bixisay hadal kasoo yeeray Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasoo ku saabsanaa dadkii laga soo masaafuriyey Magaalada Laascaanood.
“Iyada oo ay ugu wacan tahay hadallo nasiib-darro ah oo dhawaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ka sheegay arrimo ku saabsan mas’uuliyadaha madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland, xukuumadda Somaliland waxay dareensan tahay inay ku khasban tahay inay sharaxaad bixiso,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arimaha Debadda.
Bayaanka kasoo baxay Wasaaraadda Arimaha Debadda ee Somaliland ayaa lagu sheegay in Ra’isul Wasaare Rooble uu xog aan sal iyo raad toona laheyn uu ka bixiyey dadkii laga soo masaafuriyey magaalada Laascaanood.
“Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu doortay inuu gudbiyey akhbaaraad aan sal iyo raad laheyn iyo eedeymo ku saabsan arrimo la xiriira go’aanka sharciga iyo lagama maarmaamaanka ah ee dowladda Somaliland ay ku masaafurineyso shakhsiyaad gaar ah, oo si aan sharci aheyn ku deganaa degmada Laascaanood,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Somaliland ayaa sheegtay inay sodonkii sano ee lasoo dhaafay hoy siisay qaxootigii ka soo qaxay deriska Soomaaliya, iyadoo raaceysa waajibaadka bani’aadamnimada ee Somaliland ee ku xusan xeerka caalamiga ah iyo shuruucda gudaha.
Somaliland ayaa qoraalka kasoo baxay ku sheegtay in musaafurinta dadkaan ay aheyd mid gaar ah, oo ku saabsan dhanka amniga iyo codsi ka yimid dadka deegaanka Laascaanood.
“Waa muhiim inaan adkeyno in go’aanka dhulka Somaliland looga masaafurinayo shakhsiyaadka la doortay uu ka dhashay arrimo quseeya amniga, oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas’uuliyiinta degmada Laascaanood. Warbixino sirdoon iyo la-tashiyo ayaa bixiyey tilmaamo cad oo ah in shakhsiyaadkan ay halis gelinayeen ammaanka bulshada deegaanka. Sidaas darteed, dowladda Somaliland waxaa qasab ku noqotay inay tallaabo qaado, balse hab si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadahana dhinacyada, oo ay ku jirto cunno, biyo iyo gabbaad ku-meel gaar ah, iyo ayada oo aan waxyeello hanti iyo mid shakhsi la gaarsiin,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wasaaradda Arrimaha Debadda ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegtay inay xiriir dhow iyo iskaashi la leedahay dhammaan deriskeeda, iyadoo ay Somaliland si weyn uga taxadareysa arrimaha socdaalka iyo xakameynta xuduudaha, sida ay tiri.
Somaliland ayaa Dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay kasoo bixi weysay waajibaadkii ka saarnaa dadkeeda, taasoo ay sheegtay inay ku kaliftay inay ciladadeedaha gaarka ah ay u weeciso dad kale.
Waxay sheegtay in Soomaaliya la siiyey lacago badan oo gargaar caalami ah si loogu hormariyo awoodeeda, balse ay awoodi weysay inay xataa sugto ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Somaliland ayaa sheegtay inay yihiin arrimo ka baxsan xuduudaha diblomaasiyadda in “dowladda deriska ah ee Soomaaliya ay faro-geliso arrimaha Somaliland.”
“Daan-daansiga noocan ah looma qaadan doono si fudud, wuxuuna caddeymo dheeraad u yahay in dowladda Muqdisho aan loo arkin saaxiib caalami ah oo la aamini karo, marka ay noqoto nabadda, ammaanka iyo xasilloonida gobolka Geeska Afrika,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Xeer ilaaliyaha DF oo sheegay dowlado shisheeye ay ku howlan yihiin kalluumeysi sharci darro ah
by 24 mins ago 24 mins ago
Axmed Madoobe oo kulan la qaatay Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya
Jadwalka Doorashada kuraasta Aqalka sare ee Jubaland oo la shaaciyay
Haiti: Burcad afduubatay wadaado Kirishtaan ah oo codsaday 17 Milyan oo dollar
by 25 mins ago 25 mins ago
Waan-waan laga dhex waday Galmudug iyo Ahlu Sunna oo fashilmay
Golaha Amaanka oo ka shiraya Gantaalkii ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi
Farmaajo oo ku dhawaaqay go’aan cirka ku sii...
Kenya oo saraakiil culus usoo dirtay Somaliland +...
Xiddigaha Ugu Goolasha Badan 5-ta Horyaal Ee Ugu...
DF Soomaaliya war ka soo saartay dagaalka ka...
Farmaajo oo goordhowayd qaabilay Agaasimaha KMG ee Hey’adda...
Taliye Xijaar Iyo AMISOM Oo Ka Wada Hadlay...
Dutch protesters march through The Hague against ‘corona...
Dubbe: Laba maalin iyo laba habeen ma jiifan...
Man United Oo Doonaysa In Ay Heshiis Cusub...
Muxuu u baaqday shirkii madaxda maamul-goboleedyada ee Garowe?
Afarta qodob ee horseeday guusha Soomaaliya iyo guul-darrada...
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Ahlu-Sunna iyo...
Mareykanka Oo Gurmad U Fidinayo Dad Lagu Dilay...
US to donate an additional 500m Covid vaccines...
ECOWAS oo codsatay in lasii daayo Madaxweynihii Guinea
Farmaajo oo gacantiisa ku abuurtay dagaal ka xaqnimo...